Markab ka howl Xeebaha Somaaliya oo badbaadiyeey nolasha qoysaas Portugal u dhashay – Radio Daljir
Markab ka howl Xeebaha Somaaliya oo badbaadiyeey nolasha qoysaas Portugal u dhashay
Maajo 2, 2018 3:59 g 0
Markab laga leeyahay Dalka Pakistan kana shaqeeyaha Biyaha Soomaaliya ayaa badbaadiyay nolosha qoys u dhashay Dalka Portugal kuwaas oo doon ay wateen uu shidaalka ka dhamaaday.
Qoyskan ayaa ahaa dalxiisayaal,waxaana ay safar dhinaca Badda ah ku marayeen Caalamka,iyada oo Doontii ay wateen ay soo wajahday shidaal la’aan.
Warbixin ay soo saareen saraakiisha Markabka PNS Alamgir, ayey ku sheegeen in meel 180 Miyal u jirta biyaha Soomaaliya ay ka badbaadiyeen qoyska dalxiisayaasha ah,iyaga oo siiyay shidaal,daawo,Cunto iyo Biyo ay cabaan.
Sidoo kale Markabkan ayaa horay 12 shqaale u dhashay Hindiya uga badbaadiyay xeebaha Soomaaliya kaddib markii doontii ay wadeen uu Matoorka ka cilladoobay una dhaqaaqi weysay.
Madaxweynaha Puntland oo Shaqaddii ka Cayriyay Masuuliyin kala duwan